warkii.com » Andy Robertson Oo Saadaaliyay Kooxda Ku Guuleysaneysa Champions League Xilli Ciyaareedkan Ee Liverpool Kala Wareegi Doonta Koobka
Andy Robertson Oo Saadaaliyay Kooxda Ku Guuleysaneysa Champions League Xilli Ciyaareedkan Ee Liverpool Kala Wareegi Doonta Koobka
Liverpool ayaa xilli ciyaareedkan ku guuldareysatay inay difaacato koobka Champions League ka dib markii ay ku hareen wareega 16ka Champions League, iyadoo daafaca bidix Andy Robertson uu saadaaliyay kooxda Liverpool kala wareegi doonta koobka.
Champions League ayaa dib u bilaabanaya bisha soo socota iyadoo la dhameystiri doono kulamada ka haray wareega 16ka ka hor inta aan wareega 8da lagu qabanin magaalada Lisbon ee dalka Portugal oo martigelin doonta ilaa iyo kulamada finalka.
Andy Robertson ayaa sheegay in kooxaha tartanka ku haray ay mid walba fursad u heysato ku guuleysiga koobka madaama lagu ciyaarayo garoomo dhexdhexaad ah oo albaabada ay u xiran yihiin.
Laakiin waxa uu si gaar ah farta ugu fiiqay koox weli ay u harsan tahay lugta labaad ee wareega 16ka.
Wuxuu u sheegay barnaamijka The Lockdown Tactics: “Madaama garoomo faaruq ah oo dhexdhexaad ah lagu ciyaarayo, waxaan qabaa in tartanka uu furan yahay.
“Ka hor inta aan karantiilka la gelin Bayern Munich ayaa u muuqata kuwa aad u fiican sida ay u la ciyaareen Chelsea. Real Madrid mar walba waa ay muuqataa laakiin waa inay natiijada Man City dhanka kale u rogaan taasoo aan aheyn mid sahlan. Waxaan qabaa in Man City ay soo bixi karto si la mid ah Juventus.
“Garoomo xiran oo dhexdhexaad ah waxaan qabaa in mid walba oo ka mid ah uu ku guuleysan karo. Waxaan la ciyaarnay Atletico, waxayna kubada u difaacdaan sida noloshooda.
“Haddii ay hogaan ka helaan waa ay ceshanayaan. Laakiin haddii aan sharad ku galayo waxaan dhihi lahaa Bayern Munich ayaa ku guuleysaneysa koobka”